Dowladda Sacuudiga oo shaacisay in sanadkan la kordhiyay tirada Xujeyda – XAMAR POST
Dowladda Sacuudiga oo shaacisay in sanadkan la kordhiyay tirada Xujeyda
By Mohamed Abdi On Apr 9, 2022
War kasoo baxay Wasaaradda Xajka iyo Cumrada Sacuudi Carabiya ayaa lagu shaacayay in la kordhiyay tirada xujeyda sanadkan 1443 Hijriya/2022, ee soo booqaneeysa Beydka Alle.
Xukuumadda Sacuudiga ayaa sheegtay tirada Xujeyda sanadkan la gaarsiin doona hal milyan oo Xujey ah oo ka imaanaya gudaha iyo dibadda Boqortooyada Sacuudiga, iyadoo la raacayo qoondada loo kala qorsheeyay Waddamada Caalamka.
Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa sheegtay in la qorsheeyay sanadkan dadka ka qeeyb galaya Xajka in ay da’dooda ka hoseeyso 65 sano, iyadoo sidokale la sheegay in looga baahan yahay caddeeynta tallaalka COVID-19.
Dhamaan dadka ka imanaya dibadda Boqortooyada Sacuudiga ayaa laga rabaa inay soo gudbiyaan natiijada baaritaanka PCR ee fayraska Corona, 72 saacadood gudahood.
Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa Xujeyda sanadkan ka codsatay inay u hoggaansamaan hannaanka loo dajiyay gudashada Xajka, isla markaana ay raacaan talaabooyinka looga hortaggaya Xanuunka Covid 19, inta lagu jira gudashada waajibaadka xajka, si loo ilaaliyo guud ahaan badqabka Xujaayda.
Khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday xarun tareenada laga raaco oo kordhay
Faah faahin: Qarax lala eegtay Xubin katirsan Guddiga FEIT & khasaaro ka dhashay